Ex-chiratidzo Lighting Series Fekitori | China Ex-proof Lighting Series Vagadziri, Vatengesi
Chengdu Taiyi IEC Chitupa Kuputika-chiratidzo LED Mwenje neIP67
Kuvhenekera-chiratidzo chemwenje kwakakodzera nzvimbo dzakakura dzinopisa uye dzinoputika senge petrochemical zvirimwa, mashopu uye epamhenderekedzo yemafuta mapuratifomu.
2019 Chinese Fekitori Pamusoro peGomo Ex-proof Lamp yeNzvimbo Ine ngozi
Mwenje dzekuputika-dze LED dzinogona kupa mwenje wakajairwa munzvimbo dzine njodzi, senge mafuta ekuchenesa, peturu yekuzadza zviteshi, distillers, pombi nzvimbo, zvimbambaira, ngarava, mafekitori ekupenda nedzimwe nzvimbo dzine hunyoro hwakakwira, kupisa kwakanyanya uye guruva.
Yedu ye LED kuputika-chiratidzo mafashama ari nyore kumisikidza uye kuve neindasitiri-inotungamira zviuru zana-nguva yakatarwa hupenyu girobhu uye garandi yemakore matatu (zvingangoita makore mashanu). Ndokumbira utarise kune yekuraira maitiro pazasi kuti udzidze nezve zvigadzirwa zvedu zvinosangana nezvinodiwa. Ndapota taura nesu nekuda kwemitengo kana mamwe mashoko.
Chengdu Taiyi IP65 ATEX Kuputika Chiratidzo cheEmergency Mwenje
Iyo yakatungamira kuputika-chiratidzo kwekukurumidzira mwenje inoumbwa ne3.7V lithium ion kuchengetedza kwezvakatipoteredza 2200mah bhatiri; inosangana neiyo nyowani nyowani yekuputika-chiratidzo muyero. Inofambiswa ne3.7V lithium ion kuchengetedza kwezvakatipoteredza 2200mah emergency bateri magetsi emagetsi. Kana simba hombe radzimwa, kuputika-chiratidzo kwemwenje kwechimbichimbi mwenje kunogona kutangwa nekukasira, uye inogona zvakare kudzorwa neicho chinja switch.
ATEX LED Kuputika-chiratidzo Giredhi Exd IIB T4 IP66 LED Street Lamp
Mwenje wekuputika-chiratidzo chemugwagwa, iro rakapfuura-chiratidzo giredhi rerudzi rwekuputika-chiratidzo, inogona kushandiswa zvakachengeteka munzvimbo dzakasiyana dzinopfuta uye dzinoputika. Heavy-basa mabhizinesi anoshandiswa kugadzira zvine ngozi, kuvaka kweinjiniya mwenje mwenje, kuputika-chiratidzo mumigwagwa marambi akagadzirirwa petrochemical, kemikari, peturu uye mamwe masosi.
Rechargeable Led Double Musoro Kuputika-chiratidzo Emergency Exit Sign Light
Rambi rechiratidzo chekuputika rinokodzera nharaunda dzine njodzi dzakadai sekutsvaga peturu, indasitiri yemakemikari, indasitiri yemauto, uye nzvimbo dzine njodzi dzakadai sematangi emafuta, uye inoshandiswa semurairidzo wekubuda kwekuchengeteka kana senzira yekuchengetedzwa kwekubuda muchiitiko chesimba kupera.
Solar Inotungamirwa Led Marine Navigation Aviation Chipingamupinyi Yambiro Mwenje
Kuputika-chiratidzo uye kuchengetedza-isina yakaderera-kabhoni yekuvharisa mwenje mwenje inokodzera nharaunda ine gasi ine njodzi, nzvimbo 1, zoni 2, guruva rinoputika nharaunda, nzvimbo 20, zoni 21, zoni 22, mu IIA IIB IIC kirasi yekuputika-chiratidzo gasi nharaunda, tembiricha boka T1-T6 nharaunda, peturu kubvisa uye kuchengetedza Chemical, mushonga, machira, kudhinda, zvivakwa zvemauto, mwenje, nzvimbo dzine njodzi.
Kuputika-chiratidzo Alarm Emergency Yambiro Siren ine Strobe Mwenje
Iyo yekuputika-chiratidzo kurira uye mwenje aramu (yakapfupikiswa seyambiro) ndeye isina-kodhi alarm, iyo inokodzera kuiswa munzvimbo dzinoputika gasi nharaunda ine IIC (IIB) giredhi T6 tembiricha boka. Kana pakaitika njodzi sezvakaita tsaona kana moto panzvimbo yekugadzira, moto Chiratidzo chinodzorwa chinotumirwa neanodzora chinomutsa ruzha uye mwenje wearamu, inotumira maaramu uye nemasaini, uye inopedzisa chinangwa chealam. Iyo alarm inogona zvakare kushandiswa pamwe chete neyebhuku bhatani bhatani kuti uwane zvakapusa kurira uye mwenje maaramu zvinangwa. Iyo alarm inogona kushandiswa pamwe chete neyemoto alarm alarm yechero mugadziri kumba nekune dzimwe nyika. Iyo alarm inotora ultra-inopenya LED mwenje-inoburitsa chubhu, iyo inonyatso kuoneka mu360 degrees.
Rambi rezviratidzo zvitatu rinoreva izvo zvitatu-chiratidzo: isina mvura, guruva-uchapupu, uye anti-zvinokuvadza. Yakakosha anti-oxidation uye anti-ngura zvinhu uye silica gel yekuisa chisimbiso mhete inoshandiswa kuzadzisa zvinodzivirirwa zvemarambi. Iri rambi rinoita anti-ngura, mvura-chiratidzo uye anti-oxidation kurapwa pane redunhu kudzora bhodhi. Tichifunga nezve hunhu hwekupisa kupisa kwekuvhara kwemagetsi bhokisi, iro rinoshanda dunhu reakachenjera tembiricha yekudzora matatu-chiratidzo mwenje inoderedza tembiricha inoshanda yemagetsi inverter uye inoparadzanisa dunhu redziviriro kubva kumagetsi akasimba. Iyo mbiri yekuputira kurapwa kwechokubatanidza ino chengetedza kuchengetedzeka uye kuvimbika kwedunhu. Zvinoenderana nenzvimbo chaiyo yekushandira yemwenje-yechitatu-chiratidzo, pamusoro pebhokisi rekudzivirira remwenje rinorapwa nano-sprayed mwando-chiratidzo uye anti-ngura kurapwa kudzivirira kupinda kweguruva nehunyoro.
Rechargeable uye Inotakurika Warehouse Kuputika-chiratidzo Kutsvaga Kubasa Chiedza neMagnet
Yakareba-nguva basa uye mwenje mwenje inopihwa pane dzakasiyana nzvimbo senge njanji kuongorora mashandiro, veruzhinji vanoshanda patrols, mota kugadzirisa, simbi, simba fekitori, network simba, kudzivirira mafashama uye kununurwa kwenjodzi nemamwe maindasitiri.